Soo dejisan APUS Launcher 3.10.18 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: APUS Launcher
APUS Launcher – hab fudud oo degdeg badan in ay tayadoodii desktop-ka. APUS Launcher wax kabadalaya desktop-ka, waxay bixisaa shaqada ugu badan ee degdeg ah oo siman oo qalab ah. Software waxaa ka mid ah qalabka ugu wanaagsan loo gaarsiiyo, nadiifiso RAM ah, abuurin fayl smart oo ka mid ah talooyinka adeeg daruur. APUS Launcher ayaa codsi kuu ogolaanaya inaad u kordhiyo nolosha batteriga. Software ayaa sidoo kale waxaa ku jira tiro codsiyada iyaga u gaar ah in loo isticmaalo maalin kasta ku haboon ee qalab.
Ayna ka mid ah desktop
Abuuritaanka of fayl smart
Talooyinka Cloud Service
Soo dejisan APUS Launcher
Faallo ku saabsan APUS Launcher
APUS Launcher Xirfadaha la xiriira